Astaanta Shirkadda - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co., Ltd waxay ku taalaa tianjin-mid kamid ah afarta degmo ee si toos ah hoos tagta dowlada jamhuuriyada dadka, Tianjin waa gunta istaraatiijiyadeed ee wadada xariir badaha, Isgoyska hal Belt iyo One Wad . Dawladdu waxay si cad u dejisay xarun caalami ah oo gaadiid isku dhafan.
Waxaan bixinaa alaab la isku halleyn karo oo tayo sarre leh oo tayo leh ， waxaan hubinnaa meelaha aan daadashada lahayn ， aagagga dalabka waxaa ka mid ah omo baabuurta, militariga, nidaamyada qaadashada hawada, nidaamyada qiijinta matoorka, nidaamyada qaboojinta iyo kuleylka, nidaamyada waraabka, nidaamyada biyo-baxa warshadaha.Waxaan leenahay iibka dabaqadda koowaad, naqshadeynta, wax soo saarka, kooxda dabacsanaanta company Shirkadeena waxaa ku dhawaad ​​100 shaqaale ah, oo ka mid ah, waxaa jira 15 ka hor iyo ka dib iibinta, 8 farsamoyaqaanno (oo ay ku jiraan 5 injineer sarsare), Waxaan leenahay qorrax, noolaan, sare dhaqanka shirkadda.
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo hal-qof oo hal qof ah. Laga soo bilaabo baakadaha ilaa keenista, labadaba waxay raacday howlihii caadiga ahaa iyo war bixinno farsamo ayaa la bixiyay.
Aasaasaha Mr. Zhang Di, oo leh ku dhawaad ​​15 sanadood oo waayo-aragnimo ah, ayaa si joogto ah ugu jeedsada nuxurka tikniyoolajiyadda isku xidhka, iyo miyir-abuurka cusub. Steady wuxuu ballaariyey shirkadda, qiimaha wax soo saarka. Ku guuleystey sameynta qaybaha wax soo saarka si isdaba joog ah u kordhay. Sababtoo ah awooddeena farsamada ee xoogga leh, geedi socodka wax soo saarka qumman iyo caaryada saxda ah si loo abuuro waxqabad qaali ah, qalabka imtixaanka qumman, si adag u xakameeya tayada howsha ayaa xaqiiqsatay heerka tayada soosaarka tayada badeecada, nidaamka, nidaaminta, hubinta xasilloonida iyo isku halaynta ee tayada badeecada.
Aad ayaa lagugu soo dhoweynayaa inaad timaadid oo aad booqato goobteenna goobta.